Warbaahinta danwaa Media Network » Waa maxay cudueka dumarka kudhaca ee Vaginitis Home wp_nav_menu( array( 'container_class' => 'menu-header', 'theme_location' => 'primary', 'depth' => 2, ) ); ?>
Waa maxay cudueka dumarka kudhaca ee Vaginitis
July 21, 2013 - Written by mohamed Huseen abdi - Edited byKismaayo office Cudurka dumarka ku dhaca ee vaginal Infection oo ah caabuqa ama infection ka ku dhaca xubin ka taran ka haween ka ee farjiga ayaa ah cudur dhib badan ku haya dumar badan isla markaana kala kulmaan dhibaatooyin badan oo isugu jira xanuuno nadaafad xumo cun cun joogta ah iyo dhibaatooyin kale sida kaadida oo dhibta kaadida oo xanuun jisa kaadida oo gubta xanuun ay kala kulmaan galmada dhibaatooyin la xiriira dhalmada iyo kuwo kale oo badan. Dhibaatooyin ka uu keeno cudurkaan ku dhaca xubin ka taran ka haweenka ee farjiga waxaa kamida.
1: Caabuq ama infection ku dhaca Hoosta Haweenka (farjiga).
Caabuqa ama jeermis ku dhaca hoosta haweenka loona yaqaano(vaginitis) waa xajiin ama cun cun ku dhaca hoosta haweenka oo sababa keena isbeddelo aaney haweenta hore u lahaan jirin sida
1: dheecaan hoosta ama farjiga haweenta ka yimaada. 2: cuncun gudaha xubinka taran ka haween ka ah mar marka qaarna gudaha iyo dibada xubinka farjiga. 3: ur ama shiir ka soo baxda xubin ka taran ka haweenta iyo calaamado kale.
Haweenka uu ku dhaco cudurkaan badan koodu waxay leeyihiin dheecaan hoosta farjiga ka yimaada Dheecaan kaasi waxa uu hoosta haweenka ka dhigaa meel nadiif ah oo qoyan.
Dheecaan ka ka yimaada haween ka qaba cudurkaan waxa uu leeyahay ur khafiif ah midab kiisuna waa saafi, cadaan ama hurdi ah.
Waxa laga yaabaa inuu ku reebo kastuun ka dumarka uu ku dhacay cudurkaan midab ah hurdi marka uu ku qalalo kastuun ka.
Waxa laga yaabaa in dumarka qaba cudur kaan yeeshaan dhawr maalmood oo ka soconayo dheecaan badan oo saafi ah, oo simbiriirixo leh xilliga badanaa uu ku aadan yahay na waa kala-barka caado bileed ka.
Waxay tani dhacdaa marka ukun-sidaha haweenta soo daayo ukun.
Calaamadaha cudurkaan waxaa kamida.
dumarka uu ku dhaco cudurkaan Waxa ay yeelan karaan mid ka mid ah, ama in ka badan calaamadahan marka uu jiro caabuqa fash fashka farjiga haweenka:
1: Isbeddel ku dhaca xadiga, midabka ama urta dheecaanka farjiga haweenka
2: Cuncun ama gubasho agagaarka farjiga haweenka.
3: Kaadida oo gubta haweenta.
4: Kaadi qabashada oo soo badata
5: Nabaro ama finan ka soo baxa agagaarka daloolka farjiga.
6: Galmada oo xanuun haweenta ku qabata.
7: Qarqaryo ama qandho ay dareento haweenaydu.
8: Xanuun caloosha ah ama majiir caloosha ah.
haddii aad leedahay mid ka mid ah calaamadahan soo socda xaalada haweenta waa qatar waxeyna u baahan tahay daaweyn deg deg ah.
1: caabuqa ama fash fash infection oo daran.
2: dhiig xagga farjiga ka yimaado oo badan
3: qandho aad u daran.
4: xanuun dhabarka iyo ubucda ah oo aad u daran.
5: wareer iyo kor olol.
cudurkaan dumarka ku dhaca gaar ahaana ku dhaca xubinka taran ka haweenta ayaah cudur ay isu gudbin karaan labada is qaba ee reerka sidoo kalena wuxuu saameyn ku yeelan karaa ilmaha uurka gala kadib marka ay hooyadu qaado jeermiska keena cudurkaan balse cudurkaan ayaa ah cudur si fudud loo daaweyn karo waqti koobana la daaweynayo inshaa allaah.
Haddaba haddii aad leedahay xanuun kan iyo dhamaan xanuunada la xiriira xubnaha taran ka rag iyo dumar ka ama aad isku aragtay calaamadaha cudurkaan ama ay jiraan xanuuno kale oo aad kala kulantay dhibaato inshaa allaah laxiriir dhakhtarka kutakhasusay cudurada dumarka
Last reply was 4 months ago	Layla	View
Dr aad ayad ogu mahadsantahay war bixinta ad nasisay balse waxan kaa codsanaya in aad noshegto dawada ama qaabka lagu dawaynkaro xanunkan iyo dawoyinka oogu fican ee lagu daweyo
Reply	Malyuun	View
Asc dr lacag walal waad kumahad santahay casharkan wayna jiran xanunkan sida darted dawadeda nosheg